စစ်တပ်မှအရာရှိ အငြိမ်းစားတစ်ဦးရဲ့သမီးဖြစ်ပေမယ့် နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရဖွယ်ရှိနေတဲ့ ခိုင်သင်းကြည်တို့မိသားစု – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ခိုင်သင်းကြည် ကိုတော့ အားလုံးသိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့ဒီချိန်အထိ အနုပညာ လမ်းကြောင်းမှာ အောင်မြင်မှုတွေ ရပ်တည်နေခဲ့ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေပါ ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်ပါပဲနော်။ မင်းသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ အေးဆေး နေနိုင်ပေမယ့်လည်း ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မကြားမှာ ဓမ္မဘက်ကနေ အခိုင်အမာ ရပ်တည်ခဲ့သူပါပဲနော်။
သူမရဲ့ ဖခင်မှာ စစ်တပ်မှ အရာရှိ အငြိမ်းစား တစ်ဦး ဖြစ်ပေမယ့်လည်း နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့် ဥပဒေအရ အရေးယူခံရဖွယ် ရှိနေတဲ့အပြင် သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကိုပါ နိုင်ငံတော်ပိုင်အဖြစ် သိမ်းဆည်းခံရဖွယ် ရှိနေတယ်လို့ လူမှုကွန်ယက်တွင် သတင်းတွေ ပျံ့နှံ့နေတာပါနော်။ ” ဘယ်လိုတွေတောင်လဲဟယ်!!
သိမ်းဆည်း …. သွားမည် …. ” လို့ Facebook ပေါ်တွင် ရေးသားတာ မြင်တွေ့နေရပေမယ့် အတည်ပြု လို့တော့ မရသေးပါဘူး ပရိသတ်ကြီးရေ….
စဈတပျမှအရာရှိ အငွိမျးစားတဈဦးရဲ့သမီးဖွဈပမေယျ့ နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ ဥပဒအေရ အရေးယူခံရဖှယျရှိနတေဲ့ ခိုငျသငျးကွညျတို့မိသားစု
ပရိသတျကွီးရေ သရုပျဆောငျ ခိုငျသငျးကွညျ ကိုတော့ အားလုံးသိကွမယျ ထငျပါတယျနျော။ ဒီနဒေီ့ခြိနျအထိ အနုပညာ လမျးကွောငျးမှာ အောငျမွငျမှုတှေ ရပျတညျနခေဲ့ပွီး စီးပှားရေး လုပျငနျးတှပေါ ပိုငျဆိုငျနတေဲ့ မငျးသမီးတဈလကျပါပဲနျော။ မငျးသမီး တဈယောကျအနနေဲ့ အေးဆေး နနေိုငျပမေယျ့လညျး ဓမ်မနဲ့ အဓမ်မကွားမှာ ဓမ်မဘကျကနေ အခိုငျအမာ ရပျတညျခဲ့သူပါပဲနျော။
သူမရဲ့ ဖခငျမှာ စဈတပျမှ အရာရှိ အငွိမျးစား တဈဦး ဖွဈပမေယျ့လညျး နှဦေးတျောလှနျရေးမှာ ပွညျသူတှနေဲ့အတူ ပါဝငျခဲ့တာကွောငျ့ ဥပဒအေရ အရေးယူခံရဖှယျ ရှိနတေဲ့အပွငျ သူတို့ပိုငျဆိုငျတဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျးတှကေိုပါ နိုငျငံတျောပိုငျအဖွဈ သိမျးဆညျးခံရဖှယျ ရှိနတေယျလို့ လူမှုကှနျယကျတှငျ သတငျးတှေ ပြံ့နှံ့နတောပါနျော။ ” ဘယျလိုတှတေောငျလဲဟယျ!!
သိမျးဆညျး …. သှားမညျ …. ” လို့ Facebook ပျေါတှငျ ရေးသားတာ မွငျတှနေ့ရေပမေယျ့ အတညျပွု လို့တော့ မရသေးပါဘူး ပရိသတျကွီးရေ….